နိုင်ပွဲတွေနဲ့ အမှားအယွင်းမရှိရှေ့ဆက်နေတဲ့ အာဆင်နယ်
MON 22 OCT 2018PREMIER LEAGUE
Arsenal31 Leicester
Özil (45' minutes), Aubameyang (63' minutes, 66' minutes) FT Bellerín (31' minutes og)
23 Oct 2018 . 11:13 AM
လက်ရှိမှာ ပုံစံကောင်းတွေရနေတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၉)မှာ လက်စတာအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ( ၃ – ၁)နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနိုင်ပွဲဟာ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ(၁၀)ပွဲဆက်နိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ် ၃ – ၁ လက်စတာ
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဒီပွဲမှာ အဓိကတိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်း Aubameyang ကို အရန်လူစာရင်းမှာပဲ ထည့်သွင်းထားပြီး အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကို လာကာဇက် Lacazette နဲ့ အီဝိုဘီ Iwobi တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့သလို လက်စတာအသင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ ပုံမှန်ပွဲထွက်နေကြ လူစာရင်းနဲ့သာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ လက်စတာအသင်းဟာ အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့သလို တိုက်စစ်မှူး အီဟီနာချို Iheanacho ဟာလည်း အာဆင်နယ်ခံစစ်ကို အလုပ်များစေခဲ့ပါတယ်။ လက်စတာအသင်းရဲ့ ထိုးဖောက်မှုတွေကို အာဆင်နယ်ဂိုးသမားလေနို Leno လက်စွမ်းပြကာကွယ်နေတာကြောင့်သာ အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ သက်သာရာရခဲ့တာပါ။ ပွဲချိန်(၃၁)မိနစ်မှာတော့ လက်စတာအသင်းက ဦးဆောင်ဂိုးစရခဲ့ပြီး ချီဝဲလ် Chilwell ရဲ့ကန်ချက် ဘယ်လာရင် Bellerín နဲ့ထိပြီး ဂိုးဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုးပေးလိုက်ရတာကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ တိုက်စစ်ကိုပိုတင်ကစားလာခဲ့ပြီး ပွဲချိန်(၄၅)မိနစ်မှာ အိုဇေးလ် Özil နဲ့ ဘယ်လာရင်တို့ရဲ့ နားလည်မှုရှိတဲ့ အတွဲအဖက်ကနေ အိုဇေးလ်က အသင်းအတွက်ချေပဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လစ်ခ်ျစတိုင်နာ Lichtsteiner အစား အူဘာမီယန်းကိုထည့် သွင်းပြီး တိုက်စစ်ကိုပိုမြှင့်တင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန်(၆၃)မိနစ်မှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းက ဒုတိယဂိုးရရှိခဲ့ပြီး ဘယ်လာရင်ချိုးပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို အူဘာမီယန်းက အလိုက်သင့် ပိတ်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယဂိုးရပြီး သိပ်မကြာခင်ပွဲချိန်(၆၆)မိနစ်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းက တတိယဂိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိုးဟာ အဆင့်အတန်းမြင့်ခဲ့ပြီး ပြောင်မြောက်ခဲ့သလို ကစားသမားတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအတွဲအဖက်ကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဂိုးကိုတော့ ဘယ်လာရင် ၊ လာကာဇက် ၊ အိုဇေးလ် တို့ရဲ့အတွဲအဖက်ကနေ ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို အူဘာမီယန်းက ပိတ်သွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၉)အပြီးမှာ ရမှတ်(၂၁)မှတ်နဲ့ အဆင့်(၄)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
Photo: Arsenal Twitter , The Independent
နိုငျပှဲတှနေဲ့ အမှားအယှငျးမရှိရှဆေ့ကျနတေဲ့ အာဆငျနယျ
လကျရှိမှာ ပုံစံကောငျးတှရေနတေဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၉)မှာ လကျစတာအသငျးကို အိမျကှငျးမှာ ( ၃ – ၁)နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီနိုငျပှဲဟာ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ(၁၀)ပှဲဆကျနိုငျပှဲဖွဈခဲ့ပွီး ဒါဟာ ၂၀၀၇ ခုနှဈနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျလညျးဖွဈပါတယျ။
အာဆငျနယျ ၃ – ၁ လကျစတာ
အာဆငျနယျအသငျးဟာ ဒီပှဲမှာ အဓိကတိုကျစဈမှူး အူဘာမီယနျး Aubameyang ကို အရနျလူစာရငျးမှာပဲ ထညျ့သှငျးထားပွီး အသငျးရဲ့ တိုကျစဈပိုငျးကို လာကာဇကျ Lacazette နဲ့ အီဝိုဘီ Iwobi တို့ကဦးဆောငျလာခဲ့သလို လကျစတာအသငျးကတော့ သူတို့ရဲ့ ပုံမှနျပှဲထှကျနကွေ လူစာရငျးနဲ့သာ ယှဉျပွိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပထမပိုငျးမှာ လကျစတာအသငျးဟာ အကောငျးဆုံးကစားနိုငျခဲ့သလို တိုကျစဈမှူး အီဟီနာခြို Iheanacho ဟာလညျး အာဆငျနယျခံစဈကို အလုပျမြားစခေဲ့ပါတယျ။ လကျစတာအသငျးရဲ့ ထိုးဖောကျမှုတှကေို အာဆငျနယျဂိုးသမားလနေို Leno လကျစှမျးကွကာကှယျနတောကွောငျ့သာ အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ သကျသာရာရခဲ့တာပါ။ ပှဲခြိနျ(၃၁)မိနဈမှာတော့ လကျစတာအသငျးက ဦးဆောငျဂိုးစရခဲ့ပွီး ခြီဝဲလျ Chilwell ရဲ့ကနျခကျြ ဘယျလာရငျ Bellerín နဲ့ထိပွီး ဂိုးဝငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဂိုးပေးလိုကျရတာကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ တိုကျစဈကိုပိုတငျကစားလာခဲ့ပွီး ပှဲခြိနျ(၄၅)မိနဈမှာ အိုဇေးလျ Özil နဲ့ ဘယျလာရငျတို့ရဲ့ နားလညျမှုရှိတဲ့ အတှဲအဖကျကနေ အိုဇေးလျက အသငျးအတှကျခပြေဂိုးကို သှငျးယူပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ လဈချြစတိုငျနာ Lichtsteiner အစား အူဘာမီယနျးကိုထညျ့ သှငျးပွီး တိုကျစဈကိုပိုမွှငျ့တငျကစားခဲ့ပါတယျ။ ပှဲခြိနျ(၆၃)မိနဈမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျးက ဒုတိယဂိုးရရှိခဲ့ပွီး ဘယျလာရငျခြိုးပေးလိုကျတဲ့ ဘောလုံးကို အူဘာမီယနျးက အလိုကျသငျ့ ပိတျသှငျးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယဂိုးရပွီး သိပျမကွာခငျပှဲခြိနျ(၆၆)မိနဈမှာ အာဆငျနယျအသငျးက တတိယဂိုးရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီဂိုးဟာ အဆငျ့အတနျးမွငျ့ခဲ့ပွီး ပွောငျမွောကျခဲ့သလို ကစားသမားတှရေဲ့ အကောငျးဆုံးအတှဲအဖကျကိုလညျး မွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။ ဒီဂိုးကိုတော့ ဘယျလာရငျ ၊ လာကာဇကျ ၊ အိုဇေးလျ တို့ရဲ့အတှဲအဖကျကနေ ရရှိလာတဲ့ အခှငျ့အရေးကို အူဘာမီယနျးက ပိတျသှငျးယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၉)အပွီးမှာ ရမှတျ(၂၁)မှတျနဲ့ အဆငျ့(၄)နရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။
by Ko Kyue . 26 mins ago
by Naing Linn .2hours ago
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုပွဲတွေမှာ အသင်းကြီးတွေရလဒ်ကောင်းနိုင်မလား
by Ko Kyue .4hours ago
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Erling Haland